प्रा.डा. ऋषिकुमार काफ्ले – Health Post Nepal
सवाल : बिहान उठ्दा पिसाब किन पहेँलो आउँछ?
जवाफ : बिहान उठ्नासाथ पिसाब गर्दा हल्का पहेँलो हुन्छ भने त्यसलाई स्वस्थ नै मान्नुपर्छ।
राति सुतेका बेला मिर्गाैलामा चाहिनेजति मात्रामा पानी पुग्छ। थोरै पानी पिउँदा पिसाब पहेँलो हुन्छ भने त्यहाँनेर मिर्गाैलामा केही समस्या हुनसक्छ कि भन्ने हो। नत्र स्वस्थ मानिसको बिहानको पहिलो पिसाब हल्का पहेँलो हुनु राम्रो हो।
शरीरका कतिपय फोहोर पिसाबबाट पनि बाहिरिन्छ। त्यही फोहोर बाहिरिँदा पनि पिसाब पहेँलो भएको हुनसक्छ। तर, पानी कम भएको बेला गाढा पहेँलो पिसाब आउँछ, त्यो भनेको मिर्गाैलामा केही खराबी हुनसक्छ कि भन्ने हो । राति सुतेको बेलामा पनि मिर्गौला त सक्रिय नै हुन्छ।
यदि मिर्गौलामा खराबी रहेछ भने पिसाबमा फिंज आउँछ । जुन मिर्गौला रोगको पहिलो लक्षण हुनसक्छ । त्यसगरी रातिको समयमा धेरैपटक पिसाब लाग्छ भने पनि मिर्गौला बिग्रिएको संकेत हुनसक्छ।
हामीले मिर्गौलालाई स्वस्थ्य राख्नको लागि पनि दैनिक २ लिटर पानी पिउनुपर्छ।
शरीरमा विभिन्न फोहोर जम्मा भएर बसेका हुन्छन्, त्यसलाई बगाउनको लागि पनि प्रशस्त मात्रामा पानी पिउनुपर्छ।
Posted in मिर्गौला, सवाल / समाधानTagged प्रा.डा. ऋषिकुमार काफ्ले, मिर्गौलाLeaveaComment on बिहानको पहिलो पिसाब किन पहेँलो हुन्छ?
शरीरमा कुनै पनि अंग प्रत्यारोपण गरेपछि शरीरको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता अर्थात् एन्टिबडीलाई कमजोर बनाउने काम गरिन्छ । प्रत्यारोपण गरिएको अंगलाई शरीरले अरूको हो भनेर नचिनोस् र अस्वीकार नगरोस् भन्नका लागि औषधि दिइएको हुन्छ, जसले शरीरमा आएका अन्य कीटाणुलाई चिन्ने र तिनलाई अस्वीकार गर्ने प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई पनि कमजोर बनाइरहेको हुन्छ ।
प्रत्यारोपण गरिएको मिर्गौलामा समस्या आएमा वा त्यसले राम्ररी काम गर्न नसकेमा रगतमा एन्टिबडी बढ्ने गर्छ । किनकि, यतिवेला शरीरले प्रत्यारोपित मिर्गौला आफ्नो शरीरको नभई अरूको हो भनेर चिन्न थालेको हुन्छ र त्यसलाई अस्वीकार गर्न शरीरले एन्टिबडी उत्पादन सुरु गर्छ । जबसम्म शरीरले प्रत्यारोपित मिर्गौला अरूको हो भनेर चिन्दैन, तबसम्म राम्ररी काम गर्छ, तर चिन्न थालेसँगै अस्वीकारको उपाय अपनाउन थाल्छ । यसक्रममा शरीरमा एन्टिबडी बढ्न जान्छ, जसलाई बाहिर निकाल्नु जरुरी हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिलेको झेलिरहेको स्वास्थ्य समस्या ठिक यही नै हो । उहाँको १२ वर्षअघि प्रत्यारोपित मिर्गौलालाई शरीरले अरूको अंग भएको चिन्न थालेपछि शरीरमा एन्टिबडी बढ्न थालेको छ, जसलाई बाहिर निकाल्ने प्रयासस्वरूप उपचार गरिँदै छ ।
एन्टिबडी निकाल्न प्लाज्मा फेरेसिस, तर सबैमा उपयोगी हुन्छ भन्ने छैन
प्रत्यारोपण गरिएका व्यक्तिमा एन्टिबडी बन्ने प्रक्रियालाई सीमित राख्न नियमित रूपमा दिइएको औषधिका बाबजुद पनि शरीरले एन्टिबडी बढाउन थालेपछि त्यसलाई बाहिर निकाल्नु जरुरी हुन्छ । शरीरबाट एन्टिबडी निकाल्नका लागि प्लाज्मा फेरेसिस गर्नुपर्ने हुन्छ । प्लाज्मा फेरेसिस रगतमा प्लाज्मा फेर्ने प्रक्रिया हो । रगतमा एउटा भाग रातो रगत हुन्छ भने अर्को सेतो झोल हुन्छ, जसलाई प्लाज्मा भनिन्छ । एन्टिबडी रगतको त्यही झोल अर्थात् प्लाज्मामा हुन्छ । प्लाज्मा फेरेसिस गर्दा रगतमा भएको प्लाज्मालाई फेर्ने काम गरिन्छ, जसका कारण प्लाज्मामा भएको एन्टिबडी बाहिर निस्कन्छ । तर, यो उपायले सबैलाई फाइदा हुन्छ भन्ने छैन ।
प्लाज्मा फेरेसिस विधिको उपचारले कसै–कसैलाई फाइदा गर्छ भने कसैलाई नगर्न पनि सक्छ । एक–दुईपटक प्लाज्मा फेरेसिस गर्दा सुधार आएमा थप केहीपटक गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, दुईपटकसम्म गर्दा पनि सुधार नदेखिएमा सामान्यतया थप प्रयास गरिँदैन ।
प्रधानमन्त्रीमा तत्कालका लागि एन्टिबडी बढेका कारण त्यसैप्रति लक्षित भएर चिकित्सकले उपचार गर्न लागिरहनुभएको हो । प्लाज्मा फेरेसिसले राम्रो नतिजा दियो भने मिर्गौला ठिक हुन सक्ने सम्भावना बढी रहन्छ । प्लाज्मा फेरेसिस क्रिएटिन वा एन्टिबडी तल झरेको अवस्थामा मिर्गौला प्रत्यारोपणको आवश्यकता पर्दैन ।
प्लाज्मा फेरेसिस फेल भएको अवस्थामा कि डायलाइसिस, कि त प्रत्यारोपण
प्लाज्मा फेरेसिसपछि बिरामीको मिर्गौलाले नर्मल काम गरेका धेरै उदाहरण छन् । यो उपचार लागेको खण्डमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्दैन, तर यदि फेल भएको खण्डमा कि डायलाइसिस कि पुनः प्रत्यारोपणमै जानुपर्ने हुन्छ । त्यो भने प्रधानमन्त्रीमा एक–दुईपटक प्लाज्मा फेरेसिस गरेर हेरेपछि मात्र थाहा हुन्छ ।
समग्र स्वास्थ्यअवस्था हेर्दा प्रधानमन्त्रीमा पुनः प्रत्यारोपण गर्न मिल्छ
प्रधानमन्त्रीको समग्र स्वास्थ्यअवस्थालाई हेर्दा पुनः प्रत्यारोपण पनि गर्न सकिन्छ । ६८ वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न असम्भव छ भन्ने कुरा साँचो होइन । प्रधानमन्त्रीको मुटु बलियो देखिन्छ, कलेजो, बे्रन, फोक्सो पनि ठिकै अवस्थामा छन् । उहाँको समग्र स्वास्थ्य राम्रो भएका कारण पुनः प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा सफल प्रत्यारोपणको सम्भावना बढी छ ।
(हेल्थपोस्टकर्मी पुष्पराज चौलागाईंसितको टेलिफोन वार्तामा आधारित)
Posted in फिचर, विचार/विमर्शTagged प्रा.डा. ऋषिकुमार काफ्ले, मिर्गौला परीक्षणLeaveaComment on प्रधानमन्त्री ओलीको उपचारमा ३ विकल्प : प्लाज्मा फेरेसिस, पुनः प्रत्यारोपण, डायलाइसिस